Homeसमाचारबुबालाइ बृद्धआश्रममा छोड्ने छोराले भने: ‘बाऊ भनेर त्यो बुडोलाई पाल्दा धर्म लाग्छ भने थुक्छु’ (भिडियो सहित)
January 14, 2021 admin समाचार 7443
आफ्नै जन्म दिने बाबुलाई सानोमा आफुलाई र आमालाई नहेरेको भन्दै छोराले वा’स्ता नगरेपछि अहिले उनका ती छोराका बाबु बृद्धा आश्रममा छन् । उनले दिनहुँ गेटमा अरुलाई नै भेट्न’ कोही आउँदा पनि आफ्ना छोराहरु आएकी भनेर बाटो हेरी बस्छन् । उमेरले ७० लागेका ती बाबु हुन् कि’शोर लामा । उनका दुई छोरा र एक छोरी छन् । श्रीमती पनि जिउँदै छन् । सबै परिवार हुँदा’हुँदै पनि उनी बृद्धाश्रम गएका छन् ।
त्याहाँ बसेर उनले प्रत्येक दिन आफुलाई भेट्न घरबाट कोही त आउँछन् होला भन्दै गे’टतिर हेरिरहन्छन् । तर उनको परिवारबाट आजसम्म न छोराछोरी गए भेट्कोलागी न त श्रीमती नै । आखिर किन ? भन्ने प्रश्न उ’ब्जन्छन् । किन आफ्नै श्रीमानलाई बृद्धाश्रम जान बाध्य बनाईन् श्रीमतीले र छोराछोरीले बाबुलाई ? भन्ने प्रश्न उनको श्रीमती र छोरालाई गर्दा उनीहरु भन्छन्,‘त्यो उस्लाई पा’पको स’जाय भएको हो । अझैं धेरै हुन बाँकि छ ।’ यस्तो जवाफ सुनेर सबै जना चकित नै परे ।
छोराको भनाई अनुसार किशार लामाले दुईवटी श्रीमती बिहे गरेका थिए । र सम्प’त्ति सबै कान्छि श्रीमतीको नाममा गरिदिएको र आफ्नी आमालाई हेला गरेका रहेछन् । बाबु जी’वित हुँदाहँदै आमाले दःखले आफुहरुलाई हुर्काएको हुनाले छोराछोरी सबैले आमालाई नै ‘समर्थन गर्दा रहेछन् । छोराको भनाई अनुसार उनका बाबुले (किशोर) ले आज’सम्म आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो घरपरिवारको बारेमा नचिएको हुनाले आफुले पनि कुनै काका, बाजे, मूल घर केही पनि न’चिनेको बताए । – इताजा खबरबाट
August 23, 2020 admin समाचार 27893
December 30, 2020 admin समाचार 9319
नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रका च’र्चित गायक युबराज मगर र अर्की लोकप्रिय गायिका देवी घर्ति मगरले आ’वाज दिएको सालि ज्यु गीत ‘गोरखपुरे रेलैमा’यो बेला युटुबमा छोटो समयमै १० लाख दर्श’कले हेरिएको गीत भएको छ।गीत आफैमा मौ’लिक र
February 12, 2021 admin समाचार 5960